काभ्रेली किसान र उपभोक्ताको लाभका लागि कृषि मेला – पुर्णचन्द्र सिग्देल – NamoBuddha Khabar
काभ्रेली किसान र उपभोक्ताको लाभका लागि कृषि मेला – पुर्णचन्द्र सिग्देल
बिहिबार, बैशाख १३, २०७५ | ९:४७:२८ |
काभ्रेको बनेपामा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यका साथ “कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन व्यापार मेला २०७५” हुदैछ । मेला राष्ट्रिय कलाकारहरुको बेजोड प्रश्तुती सहित बैशाख १५ देखी १८ गतेसम्म सञ्चालन हुन लागेको मेला तयारी तिव्र गतिमा भईरहेको छ । संवृद्ध काभ्रे कृषि सहकारी संस्था र काभ्रे कृषि बजार मल्टिप्रपोज प्रालिको संयुक्त आयोजनामा हुने मेलामा सुरक्षित रव्यवस्थित स्टलहरुमार्फत कृषि उपजहरुको प्रदर्शनी,आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रदर्शनी,माछा,पशुजन्य बस्तुको प्रदर्शनीका साथै उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको आयोजक संस्थाका प्रमुख पुर्णचन्द्र सिग्देल भन्नुहुन्छ–“कृषक र उपभोक्तालाई लाभ दिनु नै मेलाको मुख्य उद्देश्य हो ।” मेलाको औचित्य र तयारी के छ ? संस्थाका प्रमुख सिग्देलसंग पत्रकार दिनेश घिमिरेले सोध्नुभएको छ ।
कृषि व्यापार मेला के हो र यसको किन आवश्यकता छ ?
काभ्रे जिल्ला कृषिमा अति उर्वर भूमि हो । काभ्रे जिल्लाको कूल भुभाग १,४०,४८६ हेक्टर मध्ये ५.१ प्रतिशत जमिन मात्रै मैदान, टार, उपत्यका छ । भिरालो भूभाग हुँदाहुँदै पनि काभ्रे जिल्लाले कालीमाटीमा खपत हुने तरकारीजन्य वस्तुको ११.५३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जुन देशभरीमध्येबाट पहिलो स्थान हो ।
यति मात्रामा तरकारी, फलफूल, पशुजन्य उत्पादन हुने जिल्लामा हामीले क्षेत्रिय स्तरमा यो कृषि मेला कृषक, व्यापारी, उपभोक्ता, कृषि उपज तथा सामग्री बिक्रेताहरुलाई एकाकार गर्न यो मेला महत्वपुर्ण अवसर हुनेछ । यसरी कृषि प्रवद्र्धन मेला गर्न सके समग्रमा कृषक, उपभोक्ता, कृषि उपज बिक्रेता लगायत सबैलाई लाभ हुन्छ । यसके बारेमा प्रचारप्रसार आवश्यक छ, मेला भनेको त मुख्यतः प्रचार हो ।
काभ्रे कृषि बजार जिल्लाको व्यवस्थित कृषि बजार हो भन्ने जानकारी दिन र कृषकहरुको उपज सहि रुपमा बजारसम्म आईपुगोस् भन्ने नै हाम्रो मुख्य द्येय छ । वास्तवमा हामीले चार वर्षअघिदेखी सञ्चालनमा ल्याएको काभ्रे कृषि बजार मल्टिपर्पोज प्रा.लि काभ्रे जुन उद्धेश्य छ, जिल्लामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरुलाई सहजै उपभोक्तामाझ पु¥याउने तिनै उद्धेश्यसम्म पुग्न प्रचारप्रशारको माध्यमलाई अपनाउदै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनासंग मिलेर यो मेला आयोजना गर्न लागेका हौं ।
मेलाका मुख्य आकर्षणहरु के के हुन् ?
विशेषतः यो मेलामा कृषि उपज,कृषि सामग्री, पशुजन्य वस्तुहरुको प्रदर्शनी त छँदैछ, साथमा किसानहरुबीच प्रतिस्पर्धा,उत्कृष्ट कृषकहरुलाई पुरस्कार, कृषि प्रविधि प्रदर्शनी,सूपथ मूल्य पसल, अर्गानिक उत्पादनहरुको प्रदर्शनी तथा बिक्रीवितरणका साथै धुर्मुस सुन्तली, भद्रगोल हाँस्य टेलिश्रृंखला लगायतका राष्ट्रिय कलाकारहरुको प्रस्तुती पनि रहनेछन् ।
मेलामा स्टलहरु लिन चाहनेहरुले के गर्नु पर्ला ?
स्टल लिनका लागि त्यस्तो केहि झन्झट छैन, बजारको कार्यालय वा सम्वृद्ध काभ्रे कृषि सहकारी संस्थाको कार्यालय नयाँ तरकारी बजारमा गएर सिधै बुकिङ गर्न सकिन्छ ।
मेलाका लागि सहयोग कतिको पाउनु भएको छ ?
अहिलेसम्म आर्थिक सहयोग भनेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, लभ ग्रीन नेपाल, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन ईकाई सुपरजोन बनेपा लगायतले केहि रकम दिने कुराकानी भएको छ ।
हामीले आँटेको भन्दा त न्यून रकम नै सहयोगमा जुट्छ, तैपनि कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन नभएसम्म देश सम्वृद्ध बन्दैन । यसका लागि सम्वृद्ध काभ्रे कृषि सहकारी संस्था लि.ले किसानहरुको समुह बनाई उनीहरुको उत्पादन खरिद गर्ने र सही मूल्य दिने योजना पनि रहेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको जिल्लामा हुने उत्पादनको बजारीकरणका लागि पनि हामीले एउटा चुनौति मोलेरै मेला गर्ने भएकोले हामी आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मेलाबाटै हाट बजार संचालनको घोषणा गर्ने भन्ने पनि सुनिएको छ ,हाट बजार के हो र किन ?
हाट बजार पनि एक किसिमको सुपरमार्केट नै हो । अहिलेको समान्य वुझाईमा सुपरमार्केट ठूलो लगानीमा धेरै वस्तु पाईने गरि बनाईएको व्यवस्थित बजार हो भने हाट बजार कम लगानीमा आम मानिसको उत्पादन एकैथलोमा बेच्ने गरि तोकिएको दिनमा व्यापार गर्ने ठाउँ हो ।
हाट बजार तराई क्षेत्रमा हप्ता हप्तामा बार अनुसार चलिरहेको हुन्छ, जहाँ कृषक तथा साना व्यापारीहरुले आफ्नो साना एकाईका उत्पादनहरु पनि बिक्री गर्न सक्छन्, तर पहाडी भागमा यो अलि कम प्रचलनमा छ । हाट बजार सस्तो बजार पनि हो । उत्पादक र उपभोक्ताबीच सीधा सम्पर्क हुने हुँदा यसलाई सुरुवात गर्ने सोच आएको हो ।
बनेपामै रहेका अन्य कृषि बजारसंग सहकार्य खासै नभएको देखियो,किन ?
हामीले धेरैपटक पुरानो बजारका संचालकहरुलाई सहकार्यका लागि खबर गरेकै हो । तर कुनै जवाफ आएको पाईएन र सहकार्यको कुनै तदारुकतानै नदेखाएपछि हामीले यो सुरुवात गरेका हौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको कृषक र उपभोक्ता दुवै लाभका हकदार हुनुपर्छ भन्ने हो ।
किसानको उत्पादनको उचित मूल्य, सहज आपूर्ति, उपभोक्तालाई सुपथ र सहज खरिद, सहुलियतमा कृषि कर्जा हाम्रो योजनाअनुसार विभिन्न संघसंस्थासंग सहकार्य हुन्छनै । बजारको व्यवस्थापन तथा बचत संकलन र कृषकलाई आवश्यक पर्दा कर्जा सुविधा दिन हामीले सम्वृद्ध काभ्रे कृषि सहकारी संस्था लि.सँग त कार्य आरम्भ गरिसकेका छौं । यीनै हाम्रा मुख्य योजनाहरुमा उद्धेश्य मिल्ने संघसंस्थासंग सहकार्यको ढोका कहिल्यै बन्द हुदैन ।
मेलाको उद्घाटन र कारोवारको विषयमा केहि आँकलन गर्नु भएको छ ?
लोकतन्त्र दिवस,बैशाख १५ गतेकै दिन सकारात्मक सन्दशे प्रवाहका लागि हामीले मेलाको उद्घाटन गर्दैछौं । हाम्रो यो अभियानमा संसदिय मामिला तथा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ सरिक हुनुहुनेभएको छ ।
उहाँलेनै यो मेलाको उद्घाटन गर्ने तय भईसकेको छ । कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय, सहकारी, फर्म, कम्पनी, एनजिओ लगायतलाई पनि मेला अवलोकनका लागि आग्रह गरेका छौं । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । मेलामा करिब २ करोडको कारोवारको आँकलन गरिएको छ ।